7Converter | Politika Fiarovana Fiainan'olona
Manao raharaham-barotra toy ny 7converter.com ("Company", "isika", "isika", "ny"), dia fantatsika fa ny mpampiasa ny fikarakarana momba ny fomba ny vaovao manokana no ampiasaina, ary azo avy amin'ny firaisana. Dia maka ny fiainana manokana ho zava-dehibe. Vakio ireto manaraka ireto mba hahafantarana bebe kokoa mikasika ny fiainana Manokana ny Politika.
I. NY FITSIPIKY NY FIAINANA MANOKANA
Isika dia afa-hanangona ny vaovao izay hanampy antsika hanatsara ny Services;
Manome, ary isika ihany no hanangona, ny vaovao izay afaka hamantatra anao manokana ("Mombamomba") mba hanome ny Tolotra;
Ny Orinasa tsy hinia hanangona na fangatahana Manokana Vaovao avy amin'ny olona eo amin'ny faha-13, ary tsy mamela ny olona toy izany mba hisoratra anarana. Raha toa ianao ka eo ambany ny faha-13, aza miezaka ny misoratra anarana ao amin'ny Habaka sy tsy mandefa antsika ny vaovao momba ny tenanao, anisan'izany ny anarana, adiresy, nomeraon-telefaonina, na ny adiresy mailaka. Tsy misy olona eo amin'ny faha-13 dia mety hanome misy ny mombamomba ny Orinasa, na eo amin'ny Toerana. Ao ny zava-nitranga fa dia mianatra isika fa efa nanangona ny mombamomba avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 tsy nanamafy ny ray aman-dreny fanekena isika, dia hamafa io vaovao io haingana araka izay azo atao. Raha mino ianao fa isika dia mety hahazo na inona na inona fanazavana avy na mikasika ny zaza latsaky ny 13, dia mifandraisa aminay ao amin'ny [email protected]
III. INONA NY VAOVAO NO HANANGONA?7converter.com?
Dia manangona ny vaovao matetika afaka ho zaraina ho sokajy roa:
1) angon-drakitra momba ny fomba ny mpampiasa mampiasa ny Tolotra;
2) aggregate angon-drakitra momba ny votoaty izay ny mpampiasa interacts amin'ny.
Mety mampiasa izany vaovao mba personalize sy ny hanatsarana ny services, mba hanatanteraka ny fangatahana ho an'ny sasany ny vokatra sy ny tolotra, ary ny mandinika ny fomba mampiasa ny Services. Mety hizara izany vaovao izany miaraka amin'ny mpiara-miasa izany fa dia atao ihany koa ny manome anao ny tandrify traikefa, fa izahay tsy hamoaka vaovao amin'ny mpiara-miasa amin ' ny fomba izay mamaritra anao manokana. Ireto misy ohatra ny tahirin-kevitra izahay manangona rehefa mampiasa ny Services:
Na oviana na oviana ianao mifandray amin'ny namany sary, isika tonga dia handray sy ny firaketana an-tsoratra vaovao ao amin'ny lohamilina hazo avy amin'ny navigateur, anisan'izany ny adiresy IP, ny mofomamy vaovao, sy ny pejy dia nangataka. "Cookies"dia identifiers fa isika dia mamindra ny solosaina, na finday fitaovana izay mamela antsika mba hahafantatra ny solosaina na ny fitaovana ary milaza amintsika ny fomba sy ny fotoana ny Asa dia nitsidika sy ny fomba maro ny olona. Mety ho afaka hanova ny navigateur na fitaovana toe-javatra mba hisorohana na hametra ny fanekena ny mofomamy amin'ny alalan'ny solosaina na ny fitaovana, fa mety hisakana anao tsy sasany mampiasa ny endri-javatra. Mety mampiasa Google Analytics, mba tsy manangona vaovao manokana. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia mety manana ny safidy mankarary endri-javatra sasany araka ny voalaza etsy ambany.
Google Analytics - Izany no web analytics fanompoana nomen'ny Google, Inc. ("Google"). Google Analytics fampiasana cookies mba hanampy ny namany sary handinika ny fomba mpampiasa mampiasa ny Vohikala sy ny Fampiharana. Ny tsy an'ny tena manokana ny vaovao niteraka ny mofomamy momba ny fampiasana ny vohikala dia ho azo avy amin'ny firaisana sy voatahiry avy amin'ny Google lohamilina any Etazonia ny Amerika ("ÉTATS"). Google dia mampiasa izany vaovao mba hanombanana ny fampiasana ny vohikala, manangona tatitra an-toerana ny asa ho an'ny tanjona, handinika sy manome asa hafa mifandray amin'ny tranonkala asa sy ny fampiasana ny Aterineto. Google dia tsy nifanerasera ny adiresy IP amin'ny hafa angona voatahiry amin'ny alalan'ny Google. Afaka mankarary mofomamy ao amin'ny navigateur, fa aza hadino fa raha manao izany ianareo, dia tsy ho afaka mampiasa ny endri-javatra rehetra ao an-toerana. Ny mampiasa izany toerana,manaiky ny fanodinana ny tahirin-kevitra momba anao amin'ny Google ao ny fanao sy ny tanjona voalaza etsy ambony. Ho an'ny sasany navigateur, dia afaka ihany koa hisorohana ny Google amin'ny fanangonana vaovao (anisan'izany ny adiresy IP) ny fampiasana ny mofomamy sy ny fanodinana izany vaovao izany ny misintona izany navigateur plugin sy ny fametrahana azy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Isaky ny mifandray amin'ny 7converter.com, isika dia mandray avy hatrany ary manorata fanazavana ny mpizara vatan-kazo, ohatra:
Raha toa ianao ka mampiasa ny rindrankajy, ary dia nianjera, ny fianjerana tatitra nalefa tany amin'ny lohamilina mety ahitana fanazavana momba ny rafi-miasa mampiasa.
Raha toa ianao download afa-po ny fampiasana ny biraonao rindrambaiko, dia mitahiry ny dika mitovy amin'ny solosaina ka ny fotoana manaraka dia mampifandray ny finday, tsy maintsy maka izany indray.
Raha manome antsika ny anarana sy ny adiresy mailaka, dia mampiasa izany vaovao mba hifandray anao momba ny asa sy ny vokatra. Mety hifidy-avy toy izany ny fifandraisana amin'ny fotoana rehetra unsubscribing avy amin'ny vohikala, na amin'ny alalan'ny fifandraisana antsika amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fomba tanisaina amin'ny faran'ny politika ity.
Ny angon-drakitra nangonina avy amintsika dia nalefa tany amin'ny Orinasa lohamilina ao Rosia amin'ny ankapobeny dia mamorona sy nanampy ny rafitra ho an'ny fanadihadiana. Ny Asa TSY manangona ny vaovao manaraka:
Ny finday isa
Ny namana ' finday isa
Ny saka ny finday isa
Na inona na inona afa-po ny hafatra naniraka na nahazo
Ny mozika, ny sary, na ny horonan-tsary
Afa-po fa mampakatra amin'ny alalan'ny orinasa
Moa ve isika hamoaka ny vaovao isika hanangona ivelan'ny antoko?
Ankoatra ny fanambaràna voalaza ao amin'ny tahirin-kevitra ity, dia mety hamoaka ny vaovao rehefa mino isika fa ny publication mifanaraka amin'ny lalàna, dia manoritra ny fitsipika avy amin'ny toerana, na ny miaro ny hafa ny zon'ny vahoaka, fananana, na ny fiarovana. Araka ny lalàna ampiharina, hitehirizany ny tsara isika, an-tsitrapo na ny herinandron'ny paska, mba hahatonga misy ara-dalàna ny fampiasana ny Mombamomba maneran-tany, ao anatin'izany ny, tsy misy fetra, mba: manangona, mampiasa, miditra (na mandrara ny fidirana), dingana, manatanteraka, manambara, mampiseho, fifanakalozana, hamaly ny fitoriana na raha tsy izany dia mampihatra ny zony eo ambany lalàna ampiharina, ny famindrana, ny fivarotana, mivarotra, hofan-trano, miaro, manambatra, hanadihady, manamarina, manaporofo, hampihatra, ary ny hampihatra ny zony eo ambany ampiharina ny lalàna., hamafa sy tsy mitana ny Mombamomba sy ny vaovao hafa noho ny Mombamomba ny tena Manokana.
V. DISCLAIMER MOMBA NY FIAROVANA SY NY ANTOKO FAHATELO
TSY MIANTOKA NY FIAROVANA NY MOMBAMOMBA NY TENA MANOKANA NA NY HAFA-BAOVAO AMIN'NY ENDRINY REHETRA. Isika isan-karazany ampiharina amin'ny fitandroana ny filaminana mba hahazoana antoka ny fiarovana ny Mombamomba ny tena Manokana. Ny mombamomba voatahiry ao ambadiky ny fiarovana ny tambajotra ary no hany azon'ny ny voafetra ny isan'ny olona izay manana fidirana manokana ny zo mba toy izany rafitra ary dia tsy maintsy mba hihazonana ny tsiambaratelo ny vaovao. Rehefa mametraka baiko na ny fahafahana hahazo ny vaovao manokana, dia milaza ny fampiasana azo antoka ny lohamilina. Rehetra tsiambaratelo manome mifindra ny azo Antoka ny Faladiany Sosona (SSL) ny teknolojia ary avy eo dia voaaro ao amin'ny tahiry ho an'ny fidirana ihany araka ny voalaza etsy ambony.
Amin'ny ezaka mba hanomezana anao amin'ny fitomboan'ny zava-dehibe, isika no mety ahitana antoko fahatelo-ny rohy ho ny toerana. Ireo vohikala efa misaraka sy mahaleotena ny fiainana manokana ny politika. Noho izany, dia tsy ho tompon'andraikitra fa ny votoaty sy ny asa toerana ireo. Na izany aza, isika dia manolo-tena ho fiarovana ny tsy fivadihan'ireo ny toerana sy ny mandray na ny tamberina momba ny mifandray ireo toerana (ao anatin'izany ny, raha manokana rohy tsy miasa).
VI. DIA MITSIDIKA NY TRANONKALA any ivelan'i Rosia?
VIII. INONA NO AZONAO ATAO MANKARARY, MAMAFA NA MANOVA NY FANAZAVANA OMENA ANTSIKA?
Mba hanova ny mailaka famandrihana, masìna ianao, aoka ho fantatrao amin'ny alalan'ny fanovana ny toe-javatra noho izany na amin'ny alalan'ny fandefasana antsika mailaka any amin'ny adiresy etsy ambany. Mariho tsara fa tsy noho ny famokarana fandaharam-potoana amin'ny alalan'ny mailaka, afaka mandray mailaka fa dia efa ao ny famokarana. Mba hanala rehetra ny tantara an-tserasera vaovao avy amin'ny banky angona, mba hifandray mivantana aminay amin'ny alalan'ny mailaka [email protected] Araka azo ampiharina ny lalàna, mariho tsara fa tsy mba mitahiry vaovao mikasika ny olona iray sales raharaham-barotra ho amin'ny asa fanompoana izay raharaham-barotra sy mba hihazonana ny firaketana an-tsoratra.
IX. MANAIKY ELEKTRONIKA FAMPAHAFANTARANA RAHA TOA KA NY FILAMINANA SIMBA
Raha isika, dia tsy maintsy manome filazana ny tsy nahazoan-dalana fidirana na hafa fitsabahana ho antoka ny fiarovana ny rafitra, manaiky ianao fa isika (na ireo) mba hanao izany araka izay ilaina (na an-tsitrapo) amin'ny alalan'ny fandefasana ny filazana eo amin'ny vohikala, na amin'ny alalan'ny fandefasana ny filazana misy ny adiresy mailaka dia tsy maintsy ho anao, any ny (na ireo) finoana tsara ny fisainana mazava. Manaiky ianao fa ny hitako aminao dia ho heverina ho ny filazana amin'ny hafa ny olona izay ataonareo ho ahy ianao ka hanao zavatra, sy ny tsy manaiky ny mamindra ny mahita azy ireo.
X. FANONTANIANA NA AHIAHY
Raha toa ka manana fanontaniana na ahiahy mikasika ny fiainana manokana ny politika, masìna ianao, mandefa antsika ny tsipiriany hafatra amin'ny [email protected]